Jikada Iyo Karinta
Wax ku-karinta jikada waa dhaliyaha ugu weyn oo keliya ee dabka guriga. Dabka jikadaada ka dhaca wuxuu keeni karaa waxyeello ballaran. Dababka jikadu waxay masuul ka yihiin dhaawacyada shaqsiyeed oo heer sare ah. ka feejignow jikada.	- Mar kasta la soco carruurta jikada ku jirta. Ka dheeree dusha istoofka iyo ofanka. Sidooyinka kirliyada sii jeedi.	- Ka dhig dusha istoofka, giriilarka, ofanka, range hood-ka iyo meesha wax lagu kariyo mid ka madaxbanaan xaydh, boor iyo saliid.	Dab-demiye iyo bustaha dabka waa in la dhigaa meel si fudud looga heli karo, hase ahaatee ka durugsan goobta wax lagu kariyo. MFB iyo CFA waxay ku talinayaan inaad keliya adeegsato dab-demiye ama bustaha dabka haddii aad awood ahaan iyo caqli ahaan awoodid inaad si nabadgelyo ah u adeegsato qalabkaas.	- Joog jikada dhexdeeda marna haka tegin wax karsamaya oo aan lala joogin.	- Waxyaalaha dabka qabsada sida tuuwalada caleenta shaaha iyo xaashiyaha waa in laga dheereeyaa meesha wax lagu karinayo ama dabka leh. - Waa inaad hubisaa qalabyada korantada ee jikada inay nadiif iyo habsami u shaqayn leeyihiin.	Qolka-jiifka
Khatarta dabka waxay ugu weyn tahay habeenkii markii aad hurudo. Markii aan hurudno waxaa naga dhuma dareenkeena urka. Haddii uusan jirin alaamka qiiqa oo shaqaynaya waxaa laga yaabaa inaadan toosin ama aad toosto mar dambe si aad si ammaan dabka uga baxsato.	- Sigaar ku cabidda qolka aad bay khatar u tahay. Sigaar haku cabbin qolka jiifka.	- Hubi inaan qalabka korantada sida timo-qalajiyaha ama timo-toosiyaha iyo laptop-yada aan looga tegin sariirta korkeeda.	- Daar bustaha korantada 30 daqiiqo ka hor intaadan sariirta tegin waxaadna demisaa markii aad sariirta seexanayso.	- Ka dhig busteyaasha korantada kuwa fidsan oo kontarooladoodu yaaliin dhinaca sariirta. Si joogto ah u hubi siligyada jaban ama dhamaaday.	Alaamyada qiiqa waa in lagu xidhaa meelaha dibadda qolalka la jiifsado. Alaamyada qiiqa oo dheeraad ah waa in lagu xidhaa gudaha qolalka halkaas oo qof jiifsado albaabku u xidhan yahay.	- Xusuusnow, alaamka qiiqa oo dheeraad ah oo qol kasta lagu xidho halkaas oo albaaka la soo xidho marka la hurdo.	- Keliya soo gado baaggaga kulaylka oo wata tilmaan-bixinta una isticmaal adoo raacaya tilmaan-bixinta soosaaraha.	Kululaynta
Hiitarada waxaa ka mid ah qalabyada ku-shaqeeya korantada iyo gaaska, dabka furan, hiitarka alwaaxa /waxyaalaha sida tartiibta ah u gubtaama hiitarada la qaato oo ay ka midka yihiin kuwa korantada ku shaqeeya , gaaska iyo kiirosiinka. Dababka ay dhaliyeen kululayntu waxay kordhaan bilaha qaboobaha (winter).	- Dharka la qalajinayo iyo waxyaalaha kale waa in laga dheereeyaa ugu yaraan hal mitir in u jirta dhammaan meelaha wax lagu kululeynayo.	- Hubi in hiitarada ay rakiban yihiin, loo dayactiray loogana shaqeeyo ayadoo la raacayo tilmaan-bixinta soosaaraha. - Mar kasta isticmaal shaashadda dabka oo ka horreysa dabka furan.	Dami dhammaan hiitarada la qaato waxaad kaloo demisaa dababka furan ka hor intaadan ka tegin guriga ama aadan seexan.	- Dhig qoryaha iyo waxyaalaha kale oo holca sameeya ugu yaraan meel hal mitir u jirta dabka.	- Dhuumaha qiiqa iyo shooladaha waa in la nadiifiyaa - Carruurta joogta meelaha noocyada kululaynta oo dhan waa in lala socdaa. Ilaali masaafo amaan ah oo u dhaxaysa carruurta iyo kululaynta.	Korantada
Qalabyada ku shaqeeya korantada oo ay ku jiraan double adaptors, power boards iyo xariga korantada lagu dheereeyo waa dhaliyeyaasha soo-kordhaya ee dababka. Mar kasta raac tilmaan-bixinaha soosaaraha.	- Hubi shaashadaha, laabtoobyada, taleefishinka iyo qalabka kale inay haystaan agagaarkood oo hawadu si fiiican u soo gasho aysan ahayna meel cuyuyuban ama daboolan.	- Ka demi dhammaan qalabka korantada baraha laga demiyo markii aan la isticmaalayn.	- Isticmaal laambadaha guluubyada waatkoodu hooseeyo.	Isticmaalka qalabka korontada oo hallaysan wuxuu keeni karaa dab. Keliya isticmaal qalabka sida fiican u shaqaynaya.	- Adeegso baraha power boards adoo raacaya tilmaan-bixinta soosaaraha, marna ha buux-dhaafin ama si joogto ah u hubi wixii hallaysan.	- Keliya adeegso dadka xirfadaha korantada oo la aqoonsan yahay si ay kuugu dayactiraan qalabyada korada oo hallaysan/waayarada hallaysan.	- Iska ilaali inaad isticmaasho double adaptors.	Holaca Furan
Shamacyada, iyo waxyaalaha saliidda ku shidma waxaa loo isticmaalaa munaasabadaha bulshadeed, dhaqameed iyo diimeed. Waxaa muhiim ah marka la isticmaalayo waxyaalahaas inaad u samayso si amaan ah aadna iskaga ilaaliso in dab ka dhasho meeshaas.	- Daahyada iyo waxyaalaha sida fudud dabka u qabsada mar kasta Ka dheeree dabka holaca furan leh.	- Waxaad hubisaa in carruurta iyo xayawaanku ay masaafo amaan ah u jiraan shamacyada, iyo waxyaalaha saliidda ku shidma.	- Keliya u isticmaal jiraan shamacyada, iyo waxyaalaha saliidda ku shidma inaad dulsaarto dulaha aan dabku qabsan ama gubi Karin.	Mar kasta demi sigaarada, shamacyada, iyo waxyaalaha saliidda ku shidma ka hor intaadan ka tegin guriga ama aadan seexan.	- Isticmaal haash-tareeyada dhinacyad dheer leh si aad isaga ilaaliso in wax ka daadaatan mar kastana sigaarada si quman u demi.	- Isticmaalkadabka holaca furan leh waa in mar kasta lala socdaa.	- Saar sigaarada, laytarada iyo kabriidka meel aysan gaarin carruurtu.	Loodariga Iyo BBQ
Loondariga waxaa yaal alaabada korontada ku shaqaysa sida washin mashiinka iyo qalajiyeyaasha waxaana loo isticmaalaa in lagu kaydiyo alaabo iyo kiimikooyinka nadiif ah.	- Hubi in taariikhda la tijaabiyey dhalada gaaska ay tahay mid hadda socota.	- Keliya ku isticmaal BBQ dibadda una jirsii masaafo hal mitir ah daydka, xerada xoolaha iyo derbiyada.	- Hubi in hoosku usan howlgab ahayn, xiriiradiisuna ay dhuuqsan yihiin uusanna tifqayn.	- Nadiifi filtarka dhogorta leh mar kasta oo la isticmaalo.	Mar kasta isha ku hay carruurta ag-joogta BBQ. Khamriga u cab si dhexdhexaad ah haddii aad wax karinayso, si aad naftaada iyo dadka kaleba uga ilaaliso gubashada.	- Ka dheeree qalabyada korantada biyaha. - Mar kasta u ogolow qalajiyeyaasha dharka inay sameeyaan hal wareeg oo qabowga ah (cool-down) ka hor iontaadan joojin.	- Si ammaan ah u keydi waxyaalaha kiimikada ah kana fog meel ay gaari karaan carruurtu.	Alaamka Qiiqa
Alaamka qiiqa ayaa ku siinaya digniinta hore ee dabka wuxuuna ku siinayaa waqti aad si nabadgelyo ah uga baxsato dabka. Waa ka sharci Victoria in la haysto ugu yaraan hal alaamka qiiqa ah oo lagu xiro qayb kasta ee guriga ah. Keliya alaamyada qiiqa ee shaqaynaya ayaa nafaha badbaadiya.	- Alaamyada qiiqa ku xidh saqafka.	- Dhammaan Adeegyada Dabka ee Australia waxay ku talinayaan alaamyada qiiqa oo korontada ku shaqeeya.	- Ugu yaran 30cm u jirsii derbiyada.	Haddii uusan alaamka qiiqu ku jirin gurigaaga waxaad 57% inaad lumiso ama uu waxyeeloobo gurigaagu, 26% inuu kugu dhaco dhaawac iyo in ka badan afar jeer inaad ku dhimato dabka ka dhca degaanada marka loo eego dadka haysta alaamka qiiqa oo shaqaynaya.	- TOBANKII SANOBA Dhammaan alaamyada qiiqa oo ay ku jiraan kuwa ku xidhan korantada waxay u baahan yihiin in la baddalo.	- SANNAD KIIBABaddal batariga ku jira alaamka qiiqa waxaadna si khafiif ah uga tirtirtaa boorka daboolka sare.	- BISHIIBARiix batanka tijaabada ee alaamka qiiqa bil kasta waxaadna sugtaa beep, beep beep. - AT THE END OF DAYLIGHT SAVING	Qorshaha Dab Ka-baxsiga Guriga
Waa muhiim inaad taqaano waxa la sameeyo haddii dab dhaco. Raac xeerarkan si aad u qorshayso sidaad uga baxsan lahayd dabka gurigaaga kuna tababar qoyska oo dhan.	- Haddii ay amaan tahay, albaabada soo xidh si aad u hakiso faafidda dabka iyo qiiqa.	- Get down low and stay out of the smoke.	- Wargeli oo u dig dadka kale markaad ka baxayso guriga.	Hubi inaad ka bixi karto guriga markii wax degdeg ah dhacaan. Xusuusnow, inaadan ka baxsan karin dabka haddii aad qufusho albaabadaada.	- Ku kulma meel amaan ah sida letterbox-ka oo ku yaal dibadda gurigaaga.	- Dibadda u bax dibadana joog.	- Ka wac 000 (saddex eber) moobaylka ama taleefanka deriska. Codso DABKA (FIRE).	Macluumaad Kale Oo Muhiim Ah
- Look for the Australian Standards logo when purchasing smoke alarms, fire blankets and electrical products.	- Choose low fire-risk children's nightwear styled to be close fitting and made of less flammable material. Look for the fire risk label.	- If you are going away on holiday make sure to turn off power to electrical appliances and let a neighbour know you are away.	- Reducing the temperature on your hot water service will reduce the risks of scalds.	- Hoarding in and around your home increases your risk of a fire, reduces your capacity to escape and access for firefighters.	- It is the legal responsibility of all owners and landlords of rental properties to install and maintain smoke alarms.	- If you live in an Office of Housing property you don't need to change your smoke alarm battery at the end of daylight saving.You are required to test your smoke alarm and report any faults to the Housing Call Centre 13 11 72.	- In the event of a large scale emergency such as fire, flood or industrial incident there are two ways in which you may be notified.1. Via television or radio2. Via a message to your mobile or home phoneYou need to:1. Stop what you are doing2. Listen carefully to the information provided3. Act as directed	Xiriirada Waxtarka Leh